အမှတ်ခွဲပေးလိုက်ရတဲ့ အင်္ဂလန် ၊ နိုင်ပွဲပြန်ရတဲ့ အီတလီ ၊ ဂိုးပြတ်နိုင်ဆဲ ဂျာမနီ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - Sports myanamr
အမှတ်ခွဲပေးလိုက်ရတဲ့ အင်္ဂလန် ၊ နိုင်ပွဲပြန်ရတဲ့ အီတလီ ၊ ဂိုးပြတ်နိုင်ဆဲ ဂျာမနီ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
September 9, 2021 - by Editor
ယမန်နေ့ ညက ကစား သွားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ တွေမှာတော့ ပိုလန် အသင်းဟာ အင်္ဂလန် အသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ ၁ ဂိုးစီ သရေ ရလဒ် ထွက်ပေါ်အောင် ကစား သွားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အင်္ဂလန် အတွက် ဟယ်ရီကိန်း က ၇၂ မိနစ် မှာ ဂိုးသွင်းယူ ပေးခဲ့ပေမယ့် ပိုလန် ဘက်က မိနစ် ၉၀ ကျော် မှာ ပြန်လည် ချေပ သွားခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် အတွက် ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့ ကိန်း ကတော့ လက်ရွေးစင် အတွက် ၄၁ ဂိုး နဲ့ ပဉ္စမမြောက် ဂိုးသွင်း အများဆုံး ကစားသမား ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
၂ ပွဲဆက် သရေကျ ခဲ့တဲ့ အီတလီ အသင်းကတော့ မနေ့ညက ပွဲမှာ လစ်သူရေးနီးယား အသင်းကို ၅ – ၀ နဲ့ ဂိုးပြတ် အနိုင် ရခဲ့ ပါတယ် ။ အီတလီ အတွက် မွိုက်စ်ကင်း က ၂ ဂိုး သွင်းပေးခဲ့ပြီး ကွင်းလယ်လူ ဂျော်ဂျင်ဟို ကတော့ ၁၉၆၀ နောက်ပိုင်းမှာ ပထမဆုံးသော အီတလီ နွယ်ဖွား မဟုတ်တဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
လူးဝစ် အင်းနရစ် ရဲ့ စပိန် ကလည်း နိုင်ပွဲ ဆက်ခဲ့ပြီး အဝေးကွင်းမှာ ကိုဆိုဗို အသင်းကို ဖော်နယ်လ် ၊ တောရက်စ် တို့ရဲ့ ဂိုးတွေနဲ့ အနိုင် ရရှိခဲ့ပါတယ် ။ ဂျာမနီ ကလည်း စက်တင်ဘာ ကာလကို နိုင်ပွဲနဲ့ ပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီး အဝေးကွင်းမျာ အိုက်စလန် အသင်းကို ၄ – ၀ နဲ့ အနိုင် ရရှိခဲ့ ပါတယ် ။ ဘယ်လ်ဂျီယံ အသင်း ကတော့ အဝေးကွင်းမှာ ဘီလာရပ်စ် အသင်းကို ၁ – ၀ နဲ့ အနိုင် ကစား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ရိုးမား ရှေ့တန်းလူ ဘိုဂျာ မာယိုရယ် ဟာ ဇန်နဝါရီ မှာ အသင်းကနေ ထွက်ခွာဖို့ ရှိနေပြီး ဖီအိုရင်တီးနား နဲ့ အတ္တလန်တာ အသင်းတွေ က စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဖူလ်ဟမ် အသင်းရဲ့ လူငယ် ကစားသမားလေး ဖာဘီယို ကာဗယ်ဟို ကို ရီးရဲ မက်ဒရစ် အပါအဝင် ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ် အသင်းတွေ က စိတ်ဝင်စား နေကြတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဒိန်းမတ် ကွင်းလယ်လူ ခရစ်ရှန် အဲရစ်ဆင် ဟာ လာမယ့် အောက်တိုဘာ လ ထဲမှာ သူ့ရဲ့ နှလုံး အခြေအနေ ကို ဒိန်းမတ် မှာ စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ် သွားမှာ ဖြစ်ပြီး ဘောလုံး ပြန်ကစား နိုင်ချေ ရှိမရှိ အဖြေထွက် လာဖွယ် ရှိတယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
နယ်သာလန် အတွက် ကစားပေးရင်း ဒဏ်ရာ အနည်းငယ် ရရှိ ခဲ့တဲ့ ဗန်ဒိုက် ရဲ့ အခြေအနေဟာ စိုးရိမ်ဖွယ် မရှိ ပေမယ့် လီဗာပူး နည်းပြကြီး ယာဂင် ကလော့ ကတော့ ဒီအပတ် မှာ ဗန်ဒိုက် ကို အရဲစွန့် အသုံးပြုသွားဖို့ အလားအလာ နည်းပါး တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် ကစားသမား ၂ ဦး ဖြစ်တဲ့ ဒီယန်း ဟန်ဒါဆင် နဲ့ ဒိုမီနစ် ကယ်ဗက် လီဝင်း တို့ဟာ ကိုမာ ဝေဒနာ ခံစား နေရတဲ့ ၂၅ နှစ် အရွယ် ဗြိတိန် ဘောလုံး သမား တဦး အတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၈၀၀၀ ကို စုပေါင်း လှူဒါန်း ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အသင်းရဲ့ အားကစား ဒါရိုက်တာ အီဒူး ရဲ့ နေရာကို အစားဝင် မယ့်သူလို့ သတင်းထွက် နေတဲ့ အိုဗားမားစ် ကတော့ သူဟာ လက်ရှိ လုပ်ကိုင် နေတဲ့ အိုင်ယက်စ် အသင်းမှာပဲ စိတ်နှစ် ထားပါတယ် လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး အသင်းဟာ လီဗာပူး နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲက ရစ်ဆီဂျိမ်းစ် အနီကတ်ထိမှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒိုင်လူကြီး ကို ဝိုင်းဝန်း ဖိအားပေးမှု အပေါ် FA က ဒဏ်ငွေ ချမှတ် ခဲ့ပြီး ပေါင် ၂၅၀၀၀ ပေးဆောင် ရမယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
လူတာရို မာတီနက် ရဲ့ အေးဂျင့် ကတော့ သူ့ရဲ့ ကစားသမာူဟာ အင်တာမီလန် မှာ ပျော်ရွှင် နေပြီး အသင်းနဲ့ စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုရေး ကိစ္စ ဟာလည်း အပေါင်း လက္ခဏာဆောင်တဲ့ တိုးတက်မှု ရှိနေ ပါတယ် လို့ ဖွင့်ဟ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
လီဗာပူး အပါအဝင် ဥရောပ ထိပ်သီး ကလပ်တွေ က စိတ်ဝင်စားမှု ရှိနေ ပေမယ့် ဒေါ့မွန် ကတော့ အင်္ဂလန် လူငယ် ကြယ်ပွင့်လေး ဂျုဒ် ဘယ်လင်ဟမ် ကို ၂၀၂၂ ရာသီကုန် အထိ ရောင်းထုတ်ဖို့ ဆန္ဒ မရှိဘူးလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . ။
Previous Article ဘရာဇီး ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ် မခံရတဲ့ တဦးတည်းသော ပရီးမီးယားလိဂ် ကစားသမား
Next Article မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တကျော့ပြန် ခရီးမှာ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ရယူနိုင်ချေရှိတဲ့ စံချိန် ၇ ခု